UNICEF Myanmar: 2017
ကရင်ပြည်နယ် စာသင်ကျောင်းရှိ ကလေးများ မြေမြှပ်မိုင်းများအား ခွဲခြားသိရှိခြင်း၊ ရှောင်ရှားနိုင်ခြင်း နှင့် သတင်းပို့နိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာများ သင်ယူ
Macarena Aguilar ရေးသားသည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရှေ့တောင်ဘက်ဒေသတွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာဖြစ်ပွားနေသည့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခကြောင့် တောင်ယာစိုက်ခင်းများနှင့် သစ်တောများတွင် မြေမြှပ်မိုင်းများနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော စစ်ကျန်ပစ္စည်းများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေခြင်းကြောင့် ကလေးသူငယ်များနှင့် ဒေသနေပြည်သူများအတွက် ကြီးမားသည့်အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေပါသည်။ ယင်းအခြေအနေသည် ကရင်ပြည်နယ်အတွက် အခြေအနေမှန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ၇ မြို့နယ်တွင် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းများပျံ့နှံ့လျှက်ရှိပြီး မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ သေဆုံးမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိပါသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၆ခုနှစ်မှစ၍ ယူနီဆက်နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မိုင်းအန္တရာယ်များ အကြောင်းကို စာသင်ကျောင်းများတွင် ကလေးများအား အသိပညာပေး တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အရေးပါသည့် မဟာဗျူဟာတစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။ အသက် ၈နှစ်မှ ၁၄နှစ်အကြား အသက်အရွယ် ကလေးသူငယ်များသည် လွယ်လင့်တကူ အန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်သည့် အရွယ်များဖြစ်ပြီး ယင်းအရွယ်ရှိ ကလေးများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး မိုင်းအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး အသိပညာပေး အစီအစဉ်များအား ပုံဖေါ်ဖန်တီးထားပါသည်။
“ဒီအသက်အရွယ်မှာရှိတဲ့ အုပ်စုက အများအားဖြင့် အန္တရာယ်ကျရောက်လွယ်တဲ့ အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်”ဟု ယူနီဆက်မှ ကလေးသူငယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အရာရှိ Danee Luhar ကပြောသည်။ “သူတို့တွေက စူးစမ်းချင်တယ်၊ ပုန်းအောင်းဆော့ကစားကြတယ်၊ အဲဒီအတွက်ကြောင့် အန္တရာယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီအသက်အရွယ်ရှိတဲ့ ကလေးတွေဟာ မိသားစုအတွက် ရေရှာ၊ ထင်းရှာ တာဝန်ယူကြရတဲ့အတွက် လူသွားလမ်းမဟုတ်တဲ့ နေရာတွေဆီကို လှည့်လည်သွားရောက်ရှာဖွေကြရတယ်”
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းတွင် DanChurchAid အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး Norwegian Church Aid အဖွဲ့ ၊ လူမူဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ကျောင်းပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်ရှိ ကလေးသူငယ်များဆီသို့ အသိပညာပေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
Labels: Kayin State, Mind risk education, School, UNICEF Myanmar
Kayin school children learn to identify, avoid and report landmines
Decades of armed conflict in Myanmar’s Southeast have left farming land and forests contaminated with landmines and Explosive Remnants of War (ERW), which poseamajor risk to children and their communities. This is particularly true in Kayin State, where all seven townships are plagued with explosive devices and accidents are still frequent.
Raising awareness among children in their schools about the many dangers of mines has becomeaflagship strategy for UNICEF and its partners since 2016. Children aged 8 to 14 are those most at risk and mine risk education (MRE) sessions have been designed with them in mind.
“This age group is especially vulnerable,” explains UNICEF’s Child Protection Officer Danee Luhar. “They are eager to explore and play in hideouts and will take more risks to do so. But also children this age are often in charge of fetching firewood or water for their families so will wander from the beaten paths.”
During 2017, only in Kayin state, together with DanChurchAid – Norwegian Church Aid and in collaboration with the Departments of Social Welfare and of Education, over 6000 school children have been reached.
ကျောင်းပြင်ပပညာရေး- အလုပ်လုပ်နေသောကလေးများအတွက် တစ်ခုတည်းသော “ဒုတိယအခွင့်အလမ်း”
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ် စုစုပေါင်း ၂၀% သည် ကျောင်းဆက်လက် တက်ရောက်ခြင်း မရှိကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် အခြားသော ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ ပြည်နယ်များသည် ထိပ်ဆုံးနေရာတွင် ရှိနေသည်။
ထိုကလေးအများစုသည် အလုပ်လုပ်ရန် ရွေးချယ်ကြသည်။ အခြားသူများကတော့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကြောင့် သူတို့မိသားစု တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အများစုကတော့ ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အလုပ်လုပ်ကြရသည်။ ယနေ့အချိန်တွင် ကလေးအလုပ်သမားများသည် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းတွင် ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိပြီး အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အကြားရှိ ကလေးသူငယ် ၁.၂ သန်းက အလုပ်လုပ် ကိုင်နေရပါသည်။
အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် အာကာစိုးတစ်ယောက်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။
Myanmar’s 2014 census found that 20 percent of the country’s school age children are out of school, with Kayin and other conflict affected States topping the list.
Many of these children choose to work. Others are driven by poverty to help their families make ends meet. Too many end up in hazardous work settings. Today, child labour is widespread across Myanmar with some 1.2 million children aged 5-17 currently working.
Thirteen year old Arkar Soe is one them.
Labels: child protection, Kayin State, Myanmar, NFPE, Non formal primary education, UNICEF, working child
စင်တက်မော်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၊ ပေါက်တော၊ ရခိုင်ပြည်နယ်
နံနက် ၈ နာရီ အချိန်ခန့်သာရှိသေးသော်လည်း ကလေးများ၏ သံပြိုင်ရွတ်ဆိုနေသည့် အသံများကြောင့် ယိုင်နဲ့နဲ့ ဖြစ်နေသည့် သစ်သားဆောင် စာသင်ခန်းသည် ယိမ်းထိုးလျှက်ရှိသည်။
စာသင်ဆောင် အခန်းအတွင်းတွင် “I love the monkey, I love the flowers!” “How are you? Fine thank you!” ဟု ကလေးများက သံပြိုင်ရွတ်ဆိုနေကြသည်။
သင်္ချာကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံးဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ကျွန်တော်ကြီးလာရင် ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်ပါတယ်၊ ဒါမှသာ တစ်ပါးသူတွေကိုကူညီနိုင်ပါမယ်
Ongoing violence in Myanmar continues to impact children and their communities
Children in Myanmar, especially those in remote border areas, continue to suffer the consequences of protracted crises, inter-communal conflict and discrimination. In Rakhine State, inter-communal violence that erupted in 2012 continues to plague 120,000 internally displaced people (IDP), primarily women and children, spread across 40 camps or informal sites, and host communities.
Myanmar launches its first WASH strategy and Investment Plan
Yangon, March 2017 - For the first time ever, Myanmar hasanational strategy for rural water, sanitation and hygiene (WASH) andacorresponding investment plan. The strategy and investment plan were launched jointly by the Ministers of Agriculture, Livestock and Irrigation, Health and Sports, and Education. An historical achievement, considering that the last sector analysis was conducted in 1993.
©UNICEF Myanmar/2012/Myo Thame
Posted by UNICEF Myanmar 19 comments:
Labels: UNICEF Myanmar, WASHm Strategy. rural water, water and sanitation
Building the relations with parliamentarians for children in Kachin: Champions for children’s rights
For the first time ever, UNICEF Myanmar organisedathree day workshop with Kachin state Parliament, aiming at strengthening the relationship with the parliamentarians and to advocate for children’s rights. The first part of the workshop focussed on the UN Convention on the Rights of the Child (CRC), specific child rights concerns in Kachin and Parliament’s role as champions for children’s rights. UNICEF’s Child Protection Team then zoomed in on one key concern for children in Kachin - Mine Action Awareness.
Posted by UNICEF Myanmar2comments:
Posted by UNICEF Myanmar3comments:
အိမ်မက်များ၏မြေ - ကချင် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှ ကလေးငယ်များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး မျှော်လင့်ချက်
အသက် ၁၂နှစ်အရွယ် ဘောမ်မျော်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကချင်ပြည်နယ်၏မြို့တော် မြစ်ကြီးနား အနီးရှိ စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူများနေထိုင်ရာ စခန်းတစ်ခုတွင် မိသားစုနဲ့အတူ နေထိုင်သည်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ၁၇ နှစ်ကြာခဲ့သော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု ကျိုးပျက်ပြီးနောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက ဖြစ်ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် အရပ်သား ထောင်ပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ရကာ တစ်သိန်းခန့် အိမ်ပစ်ရာပစ် ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း အပြီးသတ်သဘောတူညီမှု မရနိုင်သေးဘဲ တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား နေသည်။
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် ဘောမ်မျော်ကို မိသားစုနဲ့အတူ မြစ်ကြီးနားအနီးရှိ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ နေထိုင်ရာ ဒုက္ခသည်စခန်းတင် မြင်တွေ့ရစဉ်။
စစ်တပ်ထဲတွင် ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကို ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ထူထောင်ခဲ့သည့် ဘဝသစ်
မြစ်ကြီးနား၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ - ဇွဲချစ် (အမည်လွှဲ) မှာ သတ္တမတန်းနှင့် ကျောင်းထွက်ခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တွင် ၎င်းထက်အသက်ကြီးသော သူငယ်ချင်းများနှင့် တွဲခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ အားလုံးမှာ စစ်တပ်ထဲသို့ ဝင်လိုကြပြီး ဇွဲချစ်ကိုလည်း အတူဝင်ရန် တိုက်တွန်းကြသည်။ ဇွဲချစ်မှာ အသက် ၁၆ နှစ်နှင့် တပ်ထဲ ဝင်ခဲ့သည်။ “စစ်တပ်ထဲ ဝင်မယ်လို့ တစ်ခါမှ အိပ်မက်မမက်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီရည်မှန်းချက်လည်း မရှိခဲ့ဘူး။ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်း မသိလို့ သူငယ်ချင်းတွေ လုပ်တဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်လိုက်တာပါ” ဟု ၎င်းက ပြန်ပြောပြသည်။
ကလေးတပ်သားစုဆောင်းခြင်းကို ကာကွယ်သည့် ကြေငြာဘုတ်ကို ဇွဲချစ်နှင့် ၎င်း၏မိခင်က ကြည့်ရှုနေစဉ် ဇွဲချစ်က ဖုန်းနံပါတ်အား လက်ညှိုးထိုးပြနေစဉ်။
Labels: armed forces Myanmar, child protection, child soldiers, Kachin Sate, Tatmadaw
Myitkyina, Kachin State, November 2016 - Zwe Chit (fake name) left school when he was in grade eight. He started hanging out with four older friends. They all wanted to join the army and pushed him to do the same. He was 16 years old when he was recruited. “I never dreamed about being in the army. I didn’t have that ambition. I just followed my friends as I didn’t know what else to do with my life”, he recalls.
Zwe Chit and his mother look at the child recruitment prevention billboard and point at the hotline number
ကရင်ပြည်နယ် စာသင်ကျောင်းရှိ ကလေးများ မြေမြှပ်မိုင်...
Kayin school children learn to identify, avoid and...
ကျောင်းပြင်ပပညာရေး- အလုပ်လုပ်နေသောကလေးများအတွက် တစ...
Non-Formal Education: the only ‘second chance’ for...